थाहा खबर: सिस्नुको पाउडर बेचेर मासिक २५ हजार आम्दानी
सिस्नुको पाउडर बेचेर मासिक २५ हजार आम्दानी
सल्यान : बाटोको किनारा, खेतबारी र जंगलमा खेर गइरहेको सिस्नु आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ। समाजमा हेलाँको दृष्टिले हेरिने सिस्नु आजभोलि शहरबजारका सम्भ्रान्त परिवारले खोजी खोजी खान थालेपछि गाउँघरमा यसको व्यवसाय नै सुरु भएको छ।
जिल्लाको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिका ९ शेराका पूर्णबहादुर बुढाले सिस्नुको पाउडरबाट मनग्य आम्दानी गरेका छन्। चिसो बढेसँगै सिस्नुको माग बढेको बुढाको भनाइ छ। ‘गरिबको खानेकुरा भनेर हेलाँ गरिने सिस्नु आजभोलि धनीहरूले खोजी खोजी खाने गरेका छन्’, उनले भने।
मधुमेहका बिरामीका लागि सिस्नु निकै प्रभावकारी हुने भएकाले मागअनुसारको सिस्नुको पाउडर पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत शहरबाट माग धेरै आए पनि उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए।
कुपिण्डे दह टिमुर कृषि फर्म प्रालि नै दर्ता गराएर उनले डेढ वर्ष पहिलेदेखि सिस्नुको पाउडर पाँच सय रुपैयाँ किलोले बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए। सिस्नुको पाउडर बिक्रीबाट मासिक २५ हजार आम्दानी हुँदै आइरहेको भनाइ छ। उनले भने, ‘सिस्नुको पाउडरको खरिदका लागि ग्राहकहरू नै फर्ममा आउने गरेका छन्।’
यस उद्योगले टिमुरको पाउडर, बेसार, अदुवाको पाउडर, पुदिनाको पाउडर, दालचिनिको पाउडर, मिक्स समला उत्पादन तथा बिक्री समेत गर्दै आएको छ।
जोडो बढ्दै जाँदा बस्तीका बाटो, खेतबारी बान्ला, र जंगलभरि खेर गै रहेको भरभराउँदो सिस्नुको मुन्टा सुकाएर आफैँले धुलो बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। चिम्टार डालो बोकेर मुन्टा टिप्न जाँदा सिस्नुले पोल्ने हुँदा पाउडर बनाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए।
सिस्नुको सादा सुप तथा मास, सिमीलगायतका दलहन वस्तुमा प्रयोग गरिन्छ। सिस्नुको सुपले शरीरमा उष्ण पैदा गर्ने भएकाले जाडोमा यसको सुप स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएको सल्यान जिल्ला अस्पतालका डा. अर्जुन बुढाले बताए। सिस्नुमा प्रशस्त मात्रामा फलाम तत्व पाइने उनको भनाइ छ। यो प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएको भएको डा. बुढाले बताए।
पार्टीको बैठकमा जाँदा पनि हेलिकोप्टर प्रयोग
भेरीले बगाएर २ किशोर वेपता
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताकाे तयारी